Arsenal Oo Guul-darro Xanuun Badan Ku Bilaabatay Ciyaartii Ugu Horreysay Ee Willian U Saftay
Sunday September 06, 2020 - 21:35:43 in Maqaallo by Editor Caynaba News
Arsenal ayaa guul-darro waji gabax ah kasoo gaadhay kulan saaxiibtinimo oo ay garoonka Emirates Stadium
ku wada ciyaareen Aston Villa.
Mikel Arteta ayaa indhihiisa ku daawaday kooxdiisa oo lagu dhex karbaashayo gudaha garoonka uu doonayo inuu guulaha ku gaadho ee Emirates, iyadoo ay waliba kulanka qayb ka ahaayeen xiddigihii cusbaa ee uu ka midka ahaa Willian oo ay si bilaash ah ula soo saxeexdeen markii uu dhamaaday qandaraaskiisii Chelsea.
Gunners ayaa kulankan saaxiibtinimo ee Aston Villa waxay lasoo gashay kalsooni weyn kaddib labadii koob ee ay ka qaadeen Chelsea iyo Liverpool ee FA Cup iyo Community Shield oo ay ciyaaro qurux badan soo bandhigeen, laakiin kooxda tababare Dean Smith ee Aston Villa ayaa dhabarka u saartay guul-darro.
Kulankan oo ahaa mid aan laga sii daynin warbaahinta waxa Arsenal laba gool u dhaliyey Pierre-Emerick Aubameyang, laakiin Aston Villa ayaa gool dheeraatay oo guusha kulanka la hoyatay.
Arsenal oo ciyaar saaxiibtinimo oo toddobaadkii hore ay la dheeshay Fulham kasoo hoysay guul-weyn ayaa waxa kulankan ay awoodi waayeen inay sii wadaan rikoodhka guulahooda.
Saddexda gool ee ay guushu ku raacday Aston Villa, waxa dhaliyey Jacob Ramsey oo ah 19 jir oo laba gool ku hubsaday shabaqa Arsenal iyo goolka saddexaad oo uu u raaciyey kubbad-sameeyaha Douglas Luiz.
Arsenal ayaa xagaagan samaysay saxeexyo waaweyn oo la filayo inay awood kusoo kordhiyaan, waxaana ka mid ah Willian oo ciyaartiisii ugu horreysay ee uu Gunners u ciyaaro ahayd kulankan guul-darradu kasoo gaadhay ee Aston Villa ay ka adkaaday, difaaca reer Brazil ee Gabriel Magalhaes iyo Dani Ceballos oo ay shalay dhamaystireen saxeexiisa iyagoo sannadkii labaad amaah kaga soo qaatay Real Madrid.